Ma leedahay badan oo ka videos kulan horeysay ee Call of Duty: Advanced Dagaalka ama Xatooyada Grand Auto V, oo aad rabto inaad iyaga wax ka bedel, laakiin ma jebin bangiga? Video software tafatirka u isagana ka caawin karaa in aad splice qaybo ka mid ah oo kala duwan videos, takhaluso screens load, iyo dar ayaaba music iyo cod si ay u sameeyaan iyaga u xiiso badan oo shareable. Ka yaabban wixii xal ah software wanaagsan uu yahay in aad mashruucan? Halkan waxaa ah baakadaha software yar in ay qaban karaan shaqada:
Wixii tafatirka aasaasiga ah, waxaad ku garaaci karnaa qiimaha Windows Live Movie abuuray. WLMM waa FREE, waxay bixisaa saamaynta hufan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad cadaadin, ka dhigi thumbnails, gooyaa oo footage edit ciyaarta, waana user-friendly waayo, xataa kuwa ugu laylis video sameeyayaal. Sida waxyaabaha lacag la'aan ah ugu, waxa ay leedahay xadka iyo tiro ka mid ah kala carar. Waa adag tahay in la badbaadiyo mashaariic aad haddii aad isticmaasho barnaamij gaar ah si ay u badalo, barnaamijka inta badan laga fariisiyo, iyo video wax soo saarka ma inuu ku guuleysto abaalmarinta kasta.
Wondershare Filmora The (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa barnaamij aan qaali ahayn labada Mac iyo Windows. Waxay bixisaa in ka badan 300 oo saamayn, voiceovers, qoraalka, subtitles iyo maqal ah, oo ay la socdaan qoqobada, lana siii, qaybsama iyo falinjeeerka kartidooda. Waxay leedahay interface casri ah oo user-friendly, naqshadeynta wanaagsan iyo fursadaha PIP iyo kala guurka hore oo kaliya laga helo barnaamijyada video software badan ka qaalisan. Sidaas oo ay tahayna, barnaamijkan waxaa ku wajahan xagga bilowga ah iyo ka dhigaysa mid u fudud in la wada saaray cabsi badan videos ka day hore. Sidaas haddii aadan video ah sixiddiisa xirfad iyo ma rabaan in ay sameeyaan wax kasta oo tafatir qoon gaystay on cajalado gameplay laakiin raadinaya raqiis ah, fududahay in la isticmaalo qalab, Wondershare u qummanaado doorasho lahaa. Waxay bixiyaan maxkamad free 30 maalin si aad u aragto haddii ay si fiican kuu shaqeeya.
Wondershare Bixisaa 30 maalin tijaabo lacag la'aan ah, kala soo bixi nuqul hoos ku qoran:
Lightworks bixiya xirfad tafatirka heerka kuwa dooni, diyaar u yihiin in ay bixiyaan tag ah lacag culus oo ubiso, waqti ay qaadato si aad u barato sida loo si fiican u isticmaalaan. Lightworks la shaqeeya Windows, Linux ama OSX oo la tijaabiyey by tifaftirayaasha xirfadeed. Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda ciyaarta, inta badan sida video sixiddiisa arday, taasi ma laga yaabaa in lagu daray ah. Ma jirto caawinaad dhab ah diyaar u isticmaala cusub software ah, oo kaliya ka bixino aad u aasaasi ah si aad u hesho waxaad u bilowday. Guud ahaan, tani waa software ah heerka pro; u yimid qiimaha heer xirfadeed iyo qalooca uga yaacday ilaa waxbarasho.
Videopad Master ee Edition
Videopad bixisaa fudud ah si ay u isticmaalaan interface, iyo maroojin dheeraad ah midkood waqtiga ama tafatir storyboard heli karo. Waxaa jira version ah oo lacag la'aan ah, laakiin waxaa la furaan badan oo ka mid ah danabka waxtar leh in la heli karaa sida kharashka ku dar-on. Intaa waxaa dheer, version xorta ah sidhab ah hoos u badan oo ka mid ah hawlaha ka dib markii aad isticmaasho jeer oo kaliya dhowr, oo waa la garanayaa in ay wax yar buggy ah. Better in ubiso, qiimaha iibka haddii aad doorato software this, sida aad ka heli doonaa Suite dhamaystiran, ma xayeysiis pop-up iyo version ah macaan orodka si ay u isticmaalaan.
Waxba ma ahan wixii khibrad iyo gool aad ka heshaan videos kulan-ciyaaro aad, waxaa jira barnaamij la heli karo si fiican u habboon baahidaada. Mid kasta oo ka video software tafatirka kuwaas oo loogu talogalay isagana ay qaban karaan shaqada, kaliya go'aan adiga kugu habboon tahay!
> Resource > Game > Best Video ayeey Software for aanu arintii